» सरकारी क्वारेन्टाइनमा भद्रगोल : शौच गर्न खेतमा, सुत्न घरमा !
सरकारी क्वारेन्टाइनमा भद्रगोल : शौच गर्न खेतमा, सुत्न घरमा !
६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १४:३८
क्वारेन्टाइन भनेको संक्रमण अवधिभर आशंकितलाई छुट्टै राखेर रोगको निदान गर्ने परीक्षण विधि हो । तर बाँके नरैनापुर गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइन हेर्दा लाग्छ, यहाँ परीक्षण होइन, मानिसहरूलाई थुन्नका लागि राखिएको छ । यहाँ क्वारेन्टाइनमा पालना गर्नुपर्ने कुनै नियम पालना भएको छैन, जसले गर्दा संक्रमण नभएकालाई पनि संक्रमण हुने निश्चितजस्तै छ ।